फाल्तु वस्तुको कमाल- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
फाल्तु वस्तुको कमाल
माघ २४, २०७६ विमल खतिवडा, तस्बिर : किरण पाण्डे
पढाइ सकेपछि धेरैले आफ्नो विषयअनुसार काम खोज्छन् । तर, पढाइअनुसारै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अचेलका पुस्ता भने पढेको वा अरू नै कुनै क्षेत्रमा सिर्जनशील काम गर्न चाहन्छन् । त्यो पनि जागिरभन्दा आफ्नो बेग्लै उद्यमका रूपमा । यस्तै काम गरिरहेका युवाहरूको तीन समूह :
कवाडी सामानमा कला
काठमाडौंस्थित नख्खुका ३१ वर्षीय नितेश शर्मालाई सन् २०१५ मा कवाडी सामान संकलन गरेर नयाँ काम थालेयता खासै फुर्सद हुँदैन । व्यस्तता बढ्दो छ । उनको काम संस्था ‘धासो’ ले रक्सीका खाली बोतल र काठबाट नयाँ–नयाँ सामान तयार पार्ने गर्छ ।
‘हेर्नेबित्तिकै वाह भन्ने काम गर्न मन थियो,’ नितेश भन्छन्, ‘त्यसैले संस्थाका नाम धासो राख्यौं, यसको अर्थ एकदमै राम्रो हो ।’ उनी ए लेभल गरेपछि होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न पञ्जाव पुगेका थिए । त्यहाँ तीन वर्ष पढेपछि केही समय ताज होटलमा काम गरे । त्यसपछि जागिरका लागि धेरै चहारे । भारतको लामो बसाइपछि परिवारकै सल्लाहमा स्वदेश फर्किए पनि उनी जागिरकै खोजीमा भौंतारिए ।
केमु (हाल दराज) मा बिक्री प्रमुखको अनुभव बटुलेका उनले भने, ‘कवाडीवालाहरूले कसरी काम गर्छन्, खेर गएका सामानको पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ, सकिँदैन भन्ने कौतुहलता जाग्यो । अनि बियरका बोतलबाट केही बनाउन सकिने आइडिया आयो ।’ त्यसअघि ग्रिन लाइन सेन्टर, दरबारमार्गमा काम गर्दा उनलाई लाग्थ्यो, ‘सबैभन्दा महँगो ५ लाख रुपैयाँको रक्सी खाएपछि बोतल के गर्छन् भन्ने लाग्थ्यो ।’ उनले तीन महिना केमुमा काम गरेकै बेला रिसर्च गर्दै ज्याक डेनियल्सको बोतल प्रयोग गरी एउटा बत्ती बनाए । त्यो २० दिनभित्रै बिक्री भएपछि यस्ता सामग्रीको बजार छ भन्ने लाग्यो उनलाई । अनि छाडे जागिर र लागे कवाडी सामानको उपयोगतिर ।
सुरुमा उनीसँग टिम थिएन र त्यस कामप्रति उनलाई विश्वास नै गरेनन् । उनी कवाडी सामान जम्मा हुने ठाउँ र रेस्टुराँ धाउन थाले । रेस्टुराँ, घर, अस्पताल, होटललगायत धेरैमा प्रयोग गर्न मिल्ने सामान तयार गर्न थाले । हाल बखुन्डोलमा रहेको धासोको कार्यालयमा खोटाङकी २३ वर्षीया अलिशा राईले सोसल मिडिया र मार्केटिङको काम गर्छिन् ।
विराटनगरका ३३ वर्षीय प्रमोद खवासले कवाडी सामानलाई कलात्मक बनाउँछन् । ‘नाम कमाएको छु, दाम मलाई चल्न पुगेको छ,’ नितेशले भने ।
भरतपुर, चितवनका सौगात तिवारी सिभिल इन्जिनियरिङको तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन् । उनी नै हुन्, ‘तिम्रो कवाडीवाला’ का सहसंस्थापक र सीईओ ।
‘कलेज जाँदा प्रायः सडक छेउमा टायर, पुराना साइकल फालिएको देख्थे, के गर्ने भन्ने दिमागमा क्लिक हुँदैनथ्यो,’ २१ वर्षीय सौगात भन्छन्, ‘पढ्दै जाँदा फाल्तु वस्तुलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिने थाहा पाए । फालिएका सामानले ध्यान तान्न थाल्यो ।’ उनको रुचि सिर्जनशील काममै हो । अहिले उनी कवाडीबाट उठाएका थोत्रा साइकलको रिङ र टायरबाट कुर्सी–टेबल बनाउँछन् । उनको टिमले गुडाउन मिल्ने टेबल पनि बनाएको छ । तिम्रो कवाडीवालाले बनाएका सामग्री सप्तगण्डकी चोकस्थित ल्हायुल लाफिङ क्याफेमा देखिन्छ । कम्पनीको छुट्टै कार्यालय छैन । काम घरैबाट हुन्छ ।
‘पुरानो सामानलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास हो,’ करिब डेढ वर्षअघि काम थालेका सौगात भन्छन्, ‘ठूला टायरलाई बस्ने ठाउँ बनाएका छौं । नाफा कमाउनेभन्दा पनि समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर फोहोर व्यवस्थापन थालेका हौं ।’ वाइनका बोतललाई बत्ती बाल्न प्रयोग गरिएको छ । सुरुमा उनलाई आशिकविक्रम खड्काले साथ दिए । उनी उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया गएपछि टिममा तीन जना छन् ।
भरतपुरकै श्वेता दुलाल र श्रेया पौडेलले साथ दिइरहेका छन् । यी दुवै बीबीए तेस्रो सेमेस्टरका विद्यार्थी हुन् । टिमका सदस्यहरूको भेट हरेक साता हुन्छ । के काम गर्ने भन्ने समूहमै कुरा हुन्छ । श्वेताले पुरानो जिन्सबाट ब्याग बनाउने आइडिया ल्याइन्, जसलाई धेरैले मन पराए । उनीहरूका उत्पादनलाई युवा व्यवसायीले रुचाएका छन् ।
हात्तीको डङबाट कागज
एमबीए अध्ययनरत सन्नी राजोपाध्याय र जोनेज शाक्यले ‘इकोअर्ब’ स्थापना गरी डेढ वर्षयता हात्तीको डङ (दिसा) बाट कागज बनाइरहेका छन् । त्यसबाट पुल्चोकमा कार्यालय रहेको इकोअर्बले प्याकेजिङ गर्ने बक्स, नोटबुक, बत्ती राख्ने सामग्री र झोला बनाइरहेका छन् । यी उत्पादनको माग बढिरहेको छ ।
मंगलबजार, पाटनका २८ वर्षीय सन्नीका अनुसार चितवनको सौराहाबाट लिडा संकलन गरिन्छ । त्यसमा ५ महिलाको टिम रहेको उल्लेख गर्दै सन्नीले भने, ‘लिडा ल्याएर पखालेपछि करिब ६० प्रतिशत घाँस राख्छौं । जसलाई उमालेर मेसिनमार्फत पल्प निकाल्छौं । त्यसलाई सुकाएर काठमाडौं ल्याएपछि कागज बनाउने गर्छौं ।’ उनका अनुसार कागज तयार पार्न ५ देखि ७ दिन लाग्छ ।
सन्नीले युट्युबमा श्रीलंकामा हात्तीको डङबाट कागज बनाएको देखेका थिए । ‘सौराहामा हात्तीको बच्चा हेर्न जाँदा डङ फालिरहेको देखेपछि यसबाट केही गर्नुपर्छ भनेर नै कागज बनाउन सुरु गरेका हौं,’ उनले भने, ‘कागज उत्पादन गर्न थालेपछि सबैले चासो दिइरहेका छन् । इकोअर्बको उत्पादन कोस्टारिकासम्म पुगेको पनि सन्नीले बताए ।
बा–आमासँग पैसा लिएर सुरु गरेको व्यवसाय राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसपछि उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन केही न केही गरौं भन्ने थियो र यो काममा हात हाले ।’ उनी इकोअर्बमा सीईओ हुन् । संस्थापक जानिज कार्यसञ्चालन हेर्छन् ।
प्रकाशित : माघ २४, २०७६ १२:५३
नयाँ प्रोजेक्टमा स्कोरपियन्स
हेभिमेटल संगीतको लागि चर्चित जर्मन ब्यान्ड स्कोरपियन्सले सन् २०२० मा नयाँ एल्बम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
माघ २४, २०७६ हिमेश
धेरैका लागि खुबै मन परेको गीत हुन सक्छ, ‘विन्ड अफ चेन्ज’ । भनिरहनु पर्दैन्, यो स्कोरपियन्सको सबैभन्दा लोकप्रिय गीतमध्ये एक हो । अझ पश्चिमेली संगीतकै सबैभन्दा बढी सुनिने गीतमा पर्छ, यो । त्यसैले त यो सबैभन्दा बढी बिक्री भएको सिंगल्समा फर्छ । सन् १९९० को एल्बम ‘क्रेजी वर्ल्ड’ को गीत हो, यो । यसमा सन् अस्सी र नब्बेको दशकमा पूर्वी युरोपमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको बयान गरिएको छ । अहिले पनि यो गीत गुनगुनाउँदा उत्तिकै मिठास महसुस हुन्छ ।
केही नयाँ र केही पुराना भन्न मिल्ने अधिकांश ब्यान्डका लागि पनि प्रिय ब्यान्ड हो, स्कोरपियन्स । यो ब्यान्डले वास्तवमै कति धेरै प्रभाव पारेको थियो भनेर सोधे हुन्छ, गन्स एन्ड रोजेजदेखि मेटालिका, मोट्ली क्रयुदेखि डेभ लेपार्डसम्मका ब्यान्डलाई । यी सबैका लागि प्रिय छ, स्कोरपियन्स । त्यसैले त पुस्तौ पुस्ताका ब्यान्ड, गायक र गीत लेखकहरू यो ब्यान्डबाट धेरै प्रभावित रहेका छन् । त्यसै पनि रोलिङ स्टोनले स्कोरपियन्सलाई हेभिमेटल संगीतको नायक भनेको होइन । न त एमटीझीले स्काारेपियन्साई विनाकारण रक संगीतको राजदूत नै भनेको हो ।
साँच्चै निकै प्रभावशाली ब्यान्ड रहँदै आएको छ, यो स्कोरपियन्स । सन् सत्तरी तिरका ब्यान्डको चर्चा गर्दा यिनीहरूमध्ये लगभग अधिकांस कि त अमेरिकाका हुन्छन्, होइन भने इंग्ल्यान्डतिरका । स्कोरपियन्स भने फरक छ, यो जर्मन ब्यान्ड हो, अझ ठ्याक्कै भन्दा हानओभरको । सन् १९६५ मा रुडोल्फ सेन्करमा यो ब्यान्डको स्थापना गरेका थिए र संयोगले उनी नै यो ब्यान्डको सुरुदेखि अहिलेसम्मका एक मात्र सदस्य हुन् ।
सेन्‍कर बाहेक अरू धेरै आए र गए पनि । त्यसमध्ये पनि उनीपछि यो ब्यान्डमा लामो समय टिकेका सदस्य हुन्, गायक ख्लस मेइन । स्थापनाको केही समयपछि उनी ब्यान्डमा आबद्ध भए । ब्यान्डका जति पनि स्टुडियो एल्बम छन्, ती सबैमा उनकै स्वर छ । त्यो अर्थमा ब्यान्डका जति पनि मौलिक गीत छन्, सबै उनकै स्वरले भरिएका छन् । उनीहरू दुई जना बाहेक ब्यान्डका अहिलेका सदस्य हुन्, म्याथिस ज्याब्स, पावेल मासिवडा, मिकी डे ।
ब्यान्डका सबैभन्दा लोकप्रिय लाइनअपमा सेन्‍कर, मेइन र ज्याब्स त परे नै । त्यस बाहेक यसमा फ्रान्सिस बुचोल्ज र हर्मन रारबेल पनि मानिन्छन् । सन् १९७८ देखि १९९२ सम्म यिनै पाँच जना ब्यान्डका लागि सक्रिय रहे । त्यो त भयो, उहिलेको कुरा । ब्यान्ड आफै धेरै परिवर्तनबाट गुज्रिसकेको छ । पूर्वी युरोपमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पनि त अब कहाँ नयाँ रह्यो र ! यी सबैबीच यो ब्यान्ड आफै कहाँनिर के गरिरहेको छ त ? स्कोरपियन्स ब्यान्डका प्रशंसकका लागि यो स्वभाविक प्रश्न पनि हो ।
स्कोरपियन्सले सन् २०१७ मा अन्तिम पटक एल्बम निकालेको थियो र यसमा नयाँ गीत पनि थिएन भन्दा हुन्छ । यसको नाम नै थियो, ‘बर्न टु टच इयर फिलिङ्स, बेस्ट अफ रक ब्यालेड्स’ । खासमा यो गीतको संगालो नै थियो । यस्तोमा सन् सत्तरीका अरू ब्यान्डलाई जस्तै स्कोरपियन्सलाई पनि आरोप लाग्ने गरेको छ, कतै यो पनि अरू धेरै जस्तै सुस्ताएको त छैन ? उत्तर हो, ब्यान्ड अझै सक्रिय छ र नयाँ एल्बमको तयारी गर्दैछ ।
केही समय अगाडि मात्र ब्यान्डका फ्रन्टम्यान सेन्‍करले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘ब्यान्ड पक्कै पनि नयाँ एल्बमको तयारीमा छ । ब्यान्डले कुरिरहेको खालि उपयुक्त समय मात्र हो ।’ के यो उपयुक्त समय सन् २०२० नै हो त ? सायद हो । रोलिङ स्टोन म्यागजिनलाई नै आधार मान्न हो भने नयाँ एल्बमको तयारी सुरु भइसकेको छ र यो हुनेछ, सन् २०२० मा सबैभन्दा धेरै प्रतीक्षा गर्न मिल्ने एल्बम ।
गिटारिस्ट ज्याब्सले भर्खरै मात्र आउने एल्बमलाई लिएर एउटा अन्तर्वार्ता दिएका छन् । त्यसमा उनले भनेका छन्, ‘हो, हामी नयाँ प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छौं ।’ वर्षको सुरुमा ब्यान्डले केही समय टुरमा बिताउने छ र त्यसपछि लस एन्जलस जानेछ, एल्बमको तयारीमा । यो एल्बम चाहिँ कस्तो हुनेछ त ? स्कोरपियन्स सुरुमा रक ब्यान्ड थियो, पछि विस्तारै मेटल संगीततर्फ लाग्न थाल्यो । फेरि विस्तारै यो पुरानै स्वरूपमा फर्कन थालेको छ । खासमा प्रश्न यही हो, स्कोरपियन्सको नयाँ काम रंगीन संगीतमा आधारित हुनेछ कि उही हेभिमेटल हुनेछ ?
प्रकाशित : माघ २४, २०७६ १२:२२